Mandravarava Amin’ny Aterineto ny Fampitahana an’i Trump sy i Chavez, Fa Mahakizitina ny Governemanta Venezoelàna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2016 15:22 GMT
Sary avy amin'ilay Venezoelana mpanao sariitatra Eduardo Sanabria. Nahazoana alalana.
Kabary mirehidrehitra, olona marevaka, ary fahjtana azy hatrany amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra sy matihanina izay tsy voataty avokoa noho ny hamaroany.
Ireo fanondroana ireo sy ny hafa maro ny manery ny mpiserasera hampitaha ilay [kandidà] filoham-pirenen'i Etazonia Donald Trump sy ilay filoha Venezoelana efa lasa Hugo Chávez, ary vao nahazo tosika an-tserasera ireny hevitra ireny rehefa nahatratra ny faratampony ny hazakazaka ho filoham-pirenena:
Sariitatra EDO: Fandrendreham-bahoaka ho an'ireo Vendrana
Nitranga tao amin'ny Twitter ny ankamaroan'ireo resaka ireo, tao no nahitana ny fampitahana an'i Trump tsy amin'ilay filoha Venezoelana farany ihany fa tamin'ireo filoham-panjakana Amerikana Latina hafa tsy refesi-mandidy, nivezivezy an-tserasera ireny — matetika handrisihana ireo mpifidy Amerikana Latina handrotsa-bato ho an'ilay kandidà Demaokraty Hillary Clinton.
Tao amin'ny fantsona fampihomehezana Latino iray Flama, nanampy tamin'ny fampitahana efa nataony tany aloha tamin'ny aterineto 2015 ilay mpampihomehy Venezoelana Joanna Hausmann:
Henoy ange, rehefa amin'ny mpitarika tahaka itony, tsy olana na avy amin'ny ankavia na avy amin'ny ankavanana na avy ao afovoany ry zareo, tsy manova ny zavamisy mampihoron-koditra mahatonga ny toerana ho ratsiratsy kokoa ny fironana ara-politika […] Mampisy fahafinaretana amin'ny fijerena fahitalavitra izy ireny, tsy azo lavina izany, saingy mametraka mpitarika mampidi-doza izy ireny.
Ao amin'ny fantsona YouTube Milly, miharihary ny antsipirihan'ireo singa ireo amin'ny teny espaniola. Tondroin'ilay vlaogera ny fomban'ireo mpitarika ara-politika ireo hifantoka amin'ny famelomana ny fihetseham-pon'ny mpanaraka azy:
Paikady lehibe ataon'ireo mpitarika roa ireo ny fisehoana mirehidrehitra sy matetika tsy araka ao amin'ny famoaham-baovao.
Samy mampiasa Twitter ireto mpitarika roa tonta ireto hisehoana hatrany amin'ny fampitam-baovao sosialy, mikivantambatam-pitenenana sy mikivazivazy bontolo hisintonana mpanaraka an-tapitrisany.
Ary samy mampitambatra izany ny roa tonta amin'ny fananana fisehoana matanjaka ao amin'ny fahitalavitra lehibe. Ao amin'ny Aló Presidente, ny mpitarika sosialista mahatarik'olon'i Venezoela no miresaka politikam-pirenena toy ny Papa mandritra ny ora maro, ary matetika no maneso ireo fahadisoam-pihetsiky ny politisiana ka mampahazo vahana azy. Nanao fandaharana fahitalavitra nalaza dia nalaza i Trump “The Apprentice” [Ny Mpiofana] na na nandresy izy na resy, dia efa vonona izy ny hanokatra tambajotran-televiziona an-kosina vaovao, “Trump TV.” Ny roa tonta ireo ihany koa dia efa samy nandrahona hitory eny amin'ny fitsarana mpilaza vaovao manoratra tantara mitsikera ny politikany sy ny fomba fanaony.
Mazava loatra, goavana dia goavana ihany koa ny tsy fitoviana eo amin'ny politika sy ny vinam-piarahamonina anandratan'ireo mpitarik'olona ireo ny feony. Isaloran'i Trump ny maodelin-toekarena lazaina hoe “mitete-tsikelikely” na “trickle-down” izay lazainy fa hanohana ny fitomboam-pihariana amin'ny fanomezana tombony ny mpihary harena, raha manosika ho amin'ny politikan'ny fifampizarana indray ny hetra i Chávez. Efa za-draharaha an-taonany maro amin'ny resaka politika sy governemanta ihany koa i Chávez talohan'ny nirotsahany hofidiana ho filoha.
Ao amin'ny blaogy “Latin America Goes Global,” [Mihamanerantany i Amerika Latina] i Juan Nagel no manondro ny fahasamihafam-panentanana eo amin'i Chavez sy i Trump, amin'ny fandrisihana ny mpamaky tsy hanadino ny krizy ara-politika sy toekarena ao Venezoela noho ny fomba fitondran'i Chavez — firodanana tsy ho tontosa ao Etazonia, na dia hitondra aza i Donald Trump, satria matanjaka ny andrim-panjakana ao Etazonia:
Tsy mahay vava tahaka izao hatrany akory i Chávez. Tamin'ny taona 1998, rehefa nirotsaka voalohany ho filoha izy, dia nisy fifehezantena matotra ny fanentanana nataony ka izany no nanintona ireo tony fihetsika tsy faly maro hiaraka aminy. Mbola nafeniny ihany koa ny maha-mpitrifana azy, tamin'ny filazana fa jadona no misy ao Kiobà ary ny vina entiny dia karazana lalana ankavia tony fihetsika toy ny an'i Tony Blair. […] Ny politika tsy manjary nataon'i Chavez ihany no tompon'andraikitra tamin'ny fahapotehan'ny toekarena venezoelana […] Izany, fa tsy ilay olona miseho amin'ny famoaham-baovao, no tena Chávez aminy.
Takatro tsara ny finiavan'ireo mpaneho hevitra haha-mirazotra ilay tena tahotra amin'ny fomba fitondran'i Trump. Saingy tokony hitazona ao an-tsaina ny mpamaky fa hitondra ao anatin'ny andrim-panjakana matanjaka dia matanjaka ao Etazonia ii Trump. Tsy ho tafala ao amin'ny fitondran'i Trump ireo fanarahamaso fanamarinana sy tsindrilentam-pahefana mitazona ny prezidansa amerikana ho tsara aro.
Namehy i Nagel:
Amin'ny fandokoana an'i Chavez ho kisarisarin'olona mpandrendri-bahoaka mivenjivenjy, manompa, mihantsy tsy misy fahamendrehana, dia manao izay hahasimba an'i Venezoela ny vahiny mpanara-maso. Eny, tao anatin'ny mahaolona politika an'i Chávez izany, fa tsy izany no manan-danja aminy indrindra.
Raha hitady [ambiroa]-n'i Trump vahiny ireo vahiny mpanoratra, ny tenany ihany no mitovy amin'i Hugo Chávez.
Tena tsy mahafaly ny governemanta venezoelana ireo lahatsary sy sary-sy-soratra amin'ny media sosialy ireo.
Naneho ny fahafaliany tamin'ny alalan'ity sioka manaraka ity, ohatra, ny minisitry ny raharaham-bahiny Delcy Rodriguez:
Fanehoana avonavom-panavakavahana sy tsy fisian'ny fanjohi-kevitry ny antoko iray tsy mijery ny mpifidy azy ny fampitahana ny kandida (US) Trump amin'ny Commandante Chavez.
24 ora izayKanadà